Martin Luther King iyo Sheekada Montgomery - Manhajka iyo Hagaha Daraasadda (Isbahaysiga Dib-u-heshiisiinta) - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
(Waxaa daabacay: Fellowship of Reconciliation USA)
Hel Manhajka iyo Hagaha Waxbarashada
Markaad isu diyaarinayso inaad ixtiraamto nolosha iyo dhaxalka Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. usbuucan, iyo inaad dhawaan u dabaaldegto Bisha Taariikhda Madow, Fellowship of Reconciliation waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo daabacaadda cusub. bilaash, manhaj online iyo hage waxbarasho si ay u raacaan buuga majaajilada ee 1957, Martin Luther King iyo Sheekada Montgomery.
Waxaa soo saartay FOR oo leh macalin cilmiga bulshada oo muddo dheer ahaa, hage-cusub, hage ballaaran ayaa la sameeyay si uu uga caawiyo barayaasha, ardayda, hogaamiyayaasha bulshada, iyo qabanqaabiyeyaasha sahminta iyo ku xirnaanta buuga majaajilada ah ee taariikhiga ah ee uu sameeyay oo daabacay FOR's Alfred Hassler isagoo la tashanaya. Wadaadka Dr. King wax ka yar hal sano kadib gabagabada Qaadista Baska Montgomery.
Waxa ku jira hagaha waxa ka mid ah akhriska hore, hagida iyo su'aalaha doodaha, hawlaha casharka fasalka K-12, iyo talooyinka akhriska iyo barashada dheeraadka ah. Waxqabadyadu waxay ka kooban yihiin dukumeenti taariikhi ah, sida waraaqaha qarsoodiga ah ee Bayard Rustin iyo agabka waxbarashada codbixiyayaasha ee SNCC, iyo sidoo kale fikradaha ka qayb qaadashada halganka cadaalada ee wakhtigan xaadirka ah sida qaadacaada, dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter, iyo Hon. Wicitaankii John Lewis ee ahaa inuu sameeyo "Dhibaatada Wanaagsan."
Dhammaan kuwan waxay ujeeddadoodu tahay in la sii qoto dheereeyo, la adkeeyo, oo lagu kabo qoraalka buugga majaajillada laftiisa, iyo sidoo kale in la iftiimiyo oo la weydiiyo su'aalo ku saabsan xidhiidhka ka dhexeeya Montgomery Bus Boycott, dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah ee 1950-yadii iyo 60aadkii ee Maraykanka, iyo halgan caalami ah oo kala duwan - hore iyo hadda - nabadda iyo caddaaladda.
Waxaan rajeyneynaa inaad soo dejisan doonto casharradan PDF-ka ah ee la heli karo iyo agabka wax-barida, oo aad la wadaagi doonto kheyraadkan si ballaaran - dugsigaaga, ururkaaga, iyo shabakadaha bulshada.
“Ku Xidhan Hal Dhar Aakhiro:” Aragtiyado Qowmiyadeed iyo Adduunyo Ku Saabsan Covid-19 Faafida
Dale Snauwaert wuxuu ku doodayaa in isbadal qoto dheer oo ku yimaada siyaabaha fekerka iyo fahamka looga baahan yahay in si hufan oo bini aadamnimo leh wax looga qabto dhibaatada. U wareejinta ka soo jeedka qowmiyadeed ee u janjeedha dhinaca adduunka xudunta u ah waa bilow bilow ah oo muhiim ah. [sii wad akhriska…]
Bayaanka Xafiiska Caalamiga ah ee Nabadda: Cod Nabiyadeed oo Ku Saabsan Waqtigeena - Maamuusida MLK Jr 'Abriil 4, 1967 "Beyond Vietnam, Jebinta Aamusnaanta" Khudbadda
April 4, 2017 Warar & Muuqaal 0
Konton sano ka hor, 4tii Abriil, 1967, Martin Luther King, Jr wuxuu jeediyay khudbad dhawaaqaysa tobannaan sano. Waxay ka mid tahay tibaaxaha ugu caansan ee anshaxa nebiyada, caqliga iyo geesinimada ruuxiga ah. Khudbadiisa, King wuxuu ku kala jabay dhaleeceyn wax ku ool ah oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Xuquuqda Madaniga Mareykanka oo ka baqay dib u dhac siyaasadeed oo ku saabsan cambaareynta dagaalka musiibada ah ee madaxweyne Johnson ee Indochina, wuxuuna magacaabay caqabadaha ugu weyn ee xorriyadda Mareykanka - iyo Galbeedka: saddexda shar ee xumaanta cunsuriyada, militariga iyo maadiga xad dhaafka ah. Sida xigmaddii Nebiyadii hore, ereyada Boqorka iyo baaqa ah "kacaanka qiyamka" waa mid soo jiidasho iyo dhiirigelin leh maanta sidii ay ahaayeen shan iyo toban sano ka hor. [sii wad akhriska…]
Rabshadaha Iskudhiska ah ee Iskuulada ama Waxbarashada Nabadgelyada oo Kac ah?
January 23, 2017 Warar & Muuqaal, opinion 1
Patrick Hiller, isagoo ka jawaabaya maamulka imanaya, wuxuu soo jeedinayaa siyaabaha ay waxbarashadda nabaddu door muhiim ah uga ciyaari karto tababarka dadka si ay uga hortagaan caddaalad darrada ugana qayb galaan si wax ku ool ah bulshada. [sii wad akhriska…]